जानिराखौ कुकुर पाल्दा स्वास्थ्यमा हुने ५ फाइदाहरु – Waikhari
गृहपृष्ठ जीवन शैली जानिराखौ कुकुर पाल्दा स्वास्थ्यमा हुने ५ फाइदाहरु
जानिराखौ कुकुर पाल्दा स्वास्थ्यमा हुने ५ फाइदाहरु
अमेरिकन हर्ट एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले घरेलु जनावर पाल्ने मान्छेहरुमा मुटुरोगको सम्भावना कम हुने तथ्य बाहिर ल्याएको छ। उक्त अध्ययन अनुसार कुकुर पाल्ने परिवारमा हृदयाघात हुने सम्भावना कम रहेको देखाएको हो। यो सँगै अर्को संस्था बार्कपोस्टले घरमा कुकुर पाल्नुका फाइदाबारे वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित ५ तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
१. खुशी बढाउँछ, निराश हटाउँछ
कुकुरसँग १५ देखि ३० मिनेट समय बिताउने मानिसमा तनाव घट्न गई खुसी बढ्ने हुन्छ। कुकरसँग खेल्नाले मानिसको मस्तिष्कमा खुशी र आनन्दसँग सम्बन्धित डोपामाइन र सेरोटोनिनको मात्रा बढाउँछ। यसले मानिसमा रहेको निराशा हटाउँन मद्दत गर्छ।
२. मुटु रोगको जोखिम घटाउँछ
कुकुरसँग खेल्दा र कुकुरलाई डोराएर हिँड्दा रक्तचाप घटाउन सहयोग पुग्छ। कुकुरलाई घरबाहिर लिएर जाँदा मानिसको पनि एक्सरसाइज हुन्छ। यसले गर्दा मुटुसम्बन्धी रोगहरुको जोखिम कम हुन्छ।
३. छालाको रोग र एलर्जीबाट जोगाउन सहयोग गर्छ
कुकुरसँग खेल्दै हुर्किने बालबालिकालाई लुतो तथा छालामा हुने एलर्जीले सताउने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
४. स्वस्थ दैनिकीलाई प्रोत्साहन
कुकर पाल्नेहरुले कुकुरहरुसँग खेल्ने र काम गर्ने जिम्मेवारी पनि बहन गर्छन्, जसले गर्दा कुकुर पाल्ने व्यक्तिहरु तुलनात्मक रुपमा बढी सक्रिय हुन्छन् र दैनिकी पनि स्वस्थ हुन्छ।
५. कुकुरको कारणले मानिसहरु एक्लोपना तथा तनाव (डिप्रेशन)बाट मुक्त हुन्छन् ।
नोट: कुकुरको दिसामा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने जीवणु हुने भएकाले जथाभावी रुपमा कुकुरलाई दिसा गराउन हुँदैन। साभार श्राेतः स्वास्थ्यखबरपत्रिका बाट
यो पनि पढ्नुहोस् -किन गर्छन् मानिसले पशुसँग याैन सम्पर्क ?
भारतमा एक गर्भवती बाख्रालाई मानिसहरुले सामूहिक बलात्कार गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चामा आयो । भारतकाे हरियाणा मेवात इलाकामा २५ जुलाईमा गर्भवती बाख्राको सामूहिक बलात्कार भयाे बलात्कार पछि भोलिपल्ट बाख्राको मृत्यु भएको खबरले भारतमा हंगामा नै मच्चाइिदयाे ।
मेवात प्रहरी प्रवक्ता जितेन्द्र कुमारका अनुसार यो घटनाका आरोपीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तर प्रहरीले कसैलाई पक्रिएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता जितेन्द्र कुमारले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
जनावरसँग सेक्स !
जनावरसँग ‘सेक्स’ गर्नुलाई अंग्रेजीमा बेस्टिएलिटी भनिन्छ । यसको अर्को एक अर्थ पनि छ ‘अति क्रूर व्यवहार’ । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार कुनै व्यक्ति र जनावरबीचको शारीरिक सम्पर्कलाई बेस्टिएलिटी भनिन्छ । नेसनल सेन्टर फर वायोटेक्नोलोजी इन्फरमेसन अर्थात एनसीबीआई वेबसाइटका अनुसार कुनै व्यक्तिले जनावरसँग सेक्स गर्नु ज्यादै गम्भीर विषय हो । तर जनावरमाथि हिंसाका जुन मुद्दा दर्ता हुन्छन्, त्यसमा यस प्रकारका मुद्दा निकै कम हुन्छन् । यो दण्डनीय अपराध हो ।
एनसीबीआई रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार बेस्टिएलिटी एक प्रकारको यौन हिंसा हो जसमा कुनै जनावरको प्रयोग यौन सन्तुष्टिका लागि गरिन्छ । यसको उद्देश्य केबल शारीरिक सन्तुष्टि हो, यसमा कुनै भावनात्मक सम्बन्ध हुँदैन ।
एनसीबीआईका अनुसार केही समुदायमा बेस्टिएलिटीलाई यौन संक्रमित बिरामीको उपचारको रुपमा पनि हेरिन्छ । दिल्लीस्थित सेक्सोलोजिस्ट विनोद रैनाका अनुसार यस्ता व्यक्ति ‘सेडिस्ट’ प्रवृत्तिका हुन्छन् । यो पूरै एक प्रकारको दिमागी कुरा हो ।
डा. रैनाको बिचारमा बेस्टिएलिटी मुख्य दुई कारणले हुन सक्छ । एक, यौन कुण्ठा र अर्को यौन कल्पना ।
एक रिपोर्टका अनुसार कहिलेकाहिँ बच्चाहरुले पनि यस प्रकारको हर्कत गर्दछन् तर कुनै बच्चाको सन्दर्भमा यस्तो कुरा आयो भने त्यसलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन । पछि गएर यो खतरनाक हुन सक्छ । रिपोर्टमा यस कुरामा पनि जोड दिइएको छ कि अक्सर यस प्रकारको मामिलालाई नजरअन्दाज गरिन्छ तर यस्तो गर्नु खतरनाक हुनसक्छ ।
बेस्टिएलिटीका लागि धेरै पटक वातावरण पनि जिम्मेवार हुन्छ । धेरै पटक परिवारमा पनि सेक्सलाई लिएर यस प्रकारको माहोल बन्छ कि मानिसहरु खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सेक्सको चाहनामा मानिसहरुले जनावरलाई प्रयोग गर्दछन् ।
पहिलो घटना होइन
हरियाणाको यस घटनाले सबैलाई चकित पारेको छ । तर यो पहिलो घटना भने होइन । अमेरिकाको उत्तरपूर्वी फ्लोरिडामा पशुहरुमाथि हुने यौन हिंसामध्ये बाख्राहरु सबैभन्दा बढी निशानामा पर्ने गरेका छन् ।
एनसीबीआईको रिपोर्टमा पनि एक यस्तै घटनाको उदाहरण दिइएको छ जसमा एक १८ वर्षीय युवकले आफूले पालेका दुई बाच्छीहरुमाथि दुष्कर्म गरे । दुई बाच्छीहरुमध्ये एउटाको मृत्यु भयो । त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मानिसको वीर्य भेटियो । युवकलाई पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्दा उसले कुनै पनि पछुतो मानेन ।
भारतमा यस्तै घटनामा संविधानको धारा ३७७ अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । भारतका साथै धेरै युरोपीय देश जस्तै नेदरल्याण्ड, फ्रान्स तथा स्विजरल्याण्ड, डेनमार्कमा यो प्रतिबन्धित छ । यसका अलावा जर्मनीमा पनि यो प्रतिबन्धित छ । ब्रिटेनमा सन् २००३ मा यससँग सम्बन्धित सजायमा संशोधन गरियो र आजीवन कारावासको व्यवस्थालाई घटाएर दुई वर्ष कायम गरियो ।
यद्यपि, हंगेरी, फिनल्याण्डमा पशुसँग मानिसको यौन सम्पर्कलाई अपराध मानिँदैन । सन् २०११ मा डेनमार्क सरकारको एक रिपोर्टअनुसार १७ प्रतिशत जनावरका डाक्टरहरु मान्दछन् कि उनीहरुले हालसम्म जति जनावरको उपचार गरे, तिनीहरुमध्ये कम्तीमा एक जनावरसँग मानिसले दुष्कर्म गरेका छन् ।
के यो कुनै मनोविकार हो ?
एनसीबीआईको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने यस प्रकारको समस्या व्यक्तिहरुमा हुन्छ जो असन्तुलित जीवन गुजार्छन् । जसको बाल्यकाल घरेलु हिंसा र तनावको बीच गुज्रिन्छ । यसका साथै जो बाल्यकालमा यौन हिंसाको शिकार हुन्छन्, उनीहरुमा पनि यस प्रकारको व्यवहारको आशंका बढ्दछ ।
मनोवैज्ञानिक डा. प्रवीण भन्छन् कि असामान्य सेक्सुअल एक्टिभिटीलाई पेरिफिलिया भनिन्छ । पेरिफिलिया धेरै प्रकारका हुन्छन् । बेस्टिएलिटी योमध्येको एक हो । बेस्टिएलिटी असामान्य व्यवहार र बिरामीको बीचको अवस्था हो । तर असामान्य व्यवहार मात्रै होइन । नेक्रोफिलिया यसको दोस्रो प्रकार हो, जसमा व्यक्तिले कुनै मृतकको साथ शारीरिक सम्बन्ध राख्दछ । यसको प्रमुख कारणमा बाल्यकालमा नराम्रो अनुभव, एक्लोपन र मानसिक समस्यालाई लिन सकिन्छ ।
के हो यसको उपचार ?
डा. प्रवीणका अनुसार यस्ता समस्या समाधानका लागि अवर्सिव थेरापी दिइन्छ । तर आजभोलि यो चलनचल्तीमा छैन । यो थेरापीबाट व्यक्तिलाई यो महसुस गराइन्छ कि उ कुनै जनावरसँग छ । तर, उसलाई करेन्ट लगाइन्छ ताकि पछि यदि उसले यस्तो कुनै केही गर्‍यो भने पीडाको महसुस होस् र उ आफै टाढा रहोस् ।
यद्यपि अब यो तरिका चलमा छैन । यस्ता व्यक्तिलाई अरु पनि केही उपचार छन् तर कुनै पनि उपाय प्रभावकारी छैनन् । डा. प्रवीण मान्दछन् कि यस प्रकारका मामला निकै कम देखिन्छ । तर यसलाई केबल बिरामी मान्न सकिँदैन । उनी मान्दछन् कि यस्ता समस्यामा शक्ति प्रदान गर्ने र सही उपचार दिने दुवै सँगसँगै गरेमा मात्र फाइदा हुनसक्छ ।
पशुसँग सेक्स गर्ने व्यक्ति को कस्ता ?
ह्युमन एनिमल रोल प्लेयर्स- जसले जनावरका साथ कहिल्यै सेक्स गरेनन् तर सेक्सको इच्छा जागेपछि जनावरतर्फ आकर्षित हुन्छन् ।
रोमान्टिक पशुप्रेमी- यस्ता व्यक्ति जनावरलाई पालेर राख्दछन् र साइको सेक्सुअलिटीतर्फ आकर्षित हुन थाल्दछन् । तर सेक्स गर्दैनन् ।
असामान्य कल्पनाशील- यसमा यस्ता व्यक्तिहरु पर्दछन् जो पशु्हरुसँग सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बारेमा सोच्दछन् तर त्यस्तो कहिल्यै गर्दैनन् ।
पशुसँग कामवासना- यस्ता व्यक्ति पशुहरुलाई स्पर्श गर्दछन् । यी पशुहरुलाई अंगालो हाल्दछन् । उनीहरुले पशुहरुको गुप्तांगलाई पनि छुन्छन् तर सेक्स गर्दैनन् ।
अतिउत्साही- यी पशुहरुको हरेक अंगलाई हेर्दछन् । धेरैपटक यिनीहरु कामुक नजरले हेर्दछन् । यहाँसम्मकी पशुहरुबीच हुने यौन गतिविधिको बेला अलि बढी नै सक्रिय हुन्छन् ।
क्रुर कामुकता- यिनीहरुले पशुहरुलाई बलात्कार गर्दछन् र पीडा पनि दिन्छन् ।
मौका परस्त- यिनीहरु यौन सम्बन्धको मामलामा सामान्य हुनछन् तर मौका मिल्नासाथ पशुहरुलाई पनि बाँकी राख्दैनन् ।
नियमित पशुप्रेमी- यस्ता व्यक्ति पशुहरुसँग यौन सम्पर्क गर्न बढी रमाइलो मान्दछन् ।
हिंस्रक- यिनीहरु सेक्सको बेला पशुहरुलाई पनि मार्दिन्छन् । यहाँसम्म कि मरिसकेपछि पनि उनीहरुले सेक्स गरिरहन्छन् ।
एक्सक्लुसिभ पशुप्रेमी- यस्ता व्यक्तिहरु केबल पशुहरुसँग मात्र सेक्स गर्छन् । बीबीसी हिन्दीबाट, कृषीडेल्लीबाट
तालिबान सरकारले हटायो महिला मन्त्रालय
विश्वासको मत नपाए सरकार छाड्छु– मुख्यमन्त्री शाक्य
महिला एएफसी एसियन च्याम्पियनसिप : नेपालले आज फिलिपिन्ससँग प्रतिष्पर्धा गर्दै
कुमारी पूजाका लागि वसन्तपुर पुगे पारस शाह
भारतमा एकैदिन दुई करोड बढीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाए